Home XAALADAHA FOOTBALLADA EE QARANKA Ciyaartoyda Kubadda Cagta Ingariiska Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha
LB wuxuu soo bandhigayaa sheekada dhamaystiran ee kubadda cagta ee ugu caansan oo loo yaqaan 'Nickname'; "Picky". Our Story Story Pickford Childhood iyo Xogta Aan Bixin Karin waxay kuu keeneysaa xisaab buuxa oo ah dhacdooyin la arki karo wakhtiga carruurnimada ilaa taariikhda. Falanqaynta waxay ku saabsantahay sheekadiisa noloshiisa ka hor warkeeda, nolosha qoyska iyo waxyaabo badan oo OFF iyo ON-Pitch oo aan run ahayn oo la yaqaan ee isaga ku saabsan.
Haa, qof kastaa wuu ogyahay inuu ku kici karo goolhayaha xulka England, laakiin wax yar ayaa ka fikiraya Jordan Pickford's Biography oo ah mid xiiso leh. Hadda oo aan adieu dheeraad ah, aynu bilaabi.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Hore
Jordan Lee Pickford wuxuu ku dhashay maalinta 7th ee March 1994 ee Washington, United Kingdom. Waxa uu ku dhashay hooyadiis, Sue Pickford (xaas) iyo aabbihiis Lee Pickford (dhisaha).
Sheeko ka mid ah gawaarida ku dhashay Washington ayaa ka hadlaya kor u kaciisa sida shaqsiyadeed oo qarsoodi ah siddeedaad, dhammaanba habka loo marayo heerka koowaad ee kooxda iyo wixii ka baxsan.
Koritaanka, Pickford wuxuu ka soo qayb galay St Robert ee Newminster Catholic School. Iskuulka, wuxuu xiiseynayay inuu kubada cagta ciyaaro, gaar ahaan ahaanshaha inuu yahay goolhaye, sababtoo ah wuxuu ahaa kii ugu dheeraa ee dhan 8 da 'yarta oo la heley dhererkooda. Ka dib markii uu ciyaaray booska gool-dhalinta ee kooxda dhalinyarada ee dugsiga, waalidkiis waxay go'aansadeen in ay isku qoraan Sunderland akadeemiga markii uu weli da 'yahay 8.
"Markaad eegto dhammaan sideed jirada inta aad qiimeyneyso dhererkooda. Waxaad ogaan doontaa in ay ciyaaraha fudud yihiin, dhaqso, laakiin dhamaantood ma dhisi karaan dhismaha saxda ah - Jordan Pickford wuxuu lahaa waxyaalahan oo dhan.
Iyadoo uu ogaaday in fursadaha goolhayaha ay horay u buuxsameen, akadeemiga dhallinyarada ayaa doonayay inuu amaah u diro. Waxay lahaayeen dareen xun sababtoo ah da'diisa. Waxay diidanayeen inay u diraan amaahda. Si kastaba ha ahaatee, Pickford ma baqin. Waxa uu wadey lix deymo. Deymahaas way adagtahay oo aan la qabin laakiin waxay gacan ka geysatey wiil yar yar nin.
Pickford wuxuu la shaqeeyay dadka wanaagsan meel kasta oo uu ku soo maro kooxo da 'yarta ah. Taas bedelkeeda, markii Pickford uu kulankiisii ​​ugu horeysay ee Sunderland ka soo muuqday wuxuu horayba uga soo ciyaaray 100 kulankiisii ​​ugu horeeyay. "Marka aad fiiriso waxyaabaha aad jeceshahay David James or David Seaman, waxay ahaayeen gabdho da 'yar iyo markii ay ahaayeen 20 ama 21, waxay la ciyaarayeen wax la mid ah 100 ciyaaraha, " ayuu yiri Prudhoe, tababaraha dhalinyarada Pickford.
2011, Pickford ayaa qandaraaskiisa ugu horeeyay la saxiixday kooxda. Horumarinta xirfaddiisa, wuxuu inta badan loo adeegsaday sida Phil Barnes, oo dhaawacmay. Wuxuu bartay awoodda aad u liidata ee ah in uu nadiif noqdo.
Diiwaanka nadiifka ah ayaa keenay Everton oo ka tirsanayd 15th June June 2017, isaga oo saxiixay qandaraas shan sano ah. Lacagta bilowga ah ee ku dhow £ 30 million sababo la xariirta, taasoo ka dhigeysa goolhayaha seddexaad ee ugu qaalisan taariikhda iyo goolhayaha ugu qaalisan England.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Xiriirka
Pickford waxa uu la joogay Megan Davison oo ah caruurnimadiisii ​​caruurnimo tan iyo markii ay ahaayeen 14 waxaana ay u dhaqaaqday Liverpool markii uu ku biiray Everton.
Megan, oo si joogto ah u sharaxaya sida "Bae" on Instagram, had iyo jeer waa nin ninkeeda. Waa jaamacad ka qalinjabisay Fasalka Heerka Sare. Labada jecel waxay jecel yihiin inay tagaan fasaxyo caadi ah oo adduunka ah, gaar ahaan Bahamas.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Naftaada Shaqsiga
Jordan Pickford wuxuu leeyahay astaamaha soo socda ee shakhsiyadiisa.
Xoogagga Jordan: Naxariista, farshaxanka, maskaxda, qabowga, caqliga, muusikada
Jordan oo liita: Cabsida, kalsooni weyn, murugo, rabitaan ah in laga baxsado xaqiiqada, waxay noqon kartaa dhibane ama shahiid
Maxaa Jordan jecel: Kaligaa ah, hurdo, muusik, jacayl, warbaahin muuqaal ah, dabaasha, mawduucyada ruuxiga ah
Waa maxay Jordan oo aan jeclayn: Kuwa ku andacoonaya inay ogaadaan-isaga oo dhan, lagu dhaleeceeyay, horey u soo laabteen si ay ula yaabaan isaga iyo naxariis darro nooc kasta
Jordan waa mid aad u fiican oo aad u badan oo farxad iyo qosol leh. Sidaa darted, wuxuu inta badan isku arkaa shirkad dad kala duwan. Jordan waa iskaa ujeeda, marwalba wuu jecel yahay inuu caawiyo dadka kale, iyada oo aan rajo ka qabin inuu wax dib u helo.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Nolosha Qoyska
Jordan Pickford wuxuu ka yimid asal ka soo jeeda qoyskooda. Wararkii ugu danbeeyay ayaa sheegaya in qoyskeedu uu ka soo jeedo Aasiya, sidaas darteed sababta magaca Lee.
Jordan ayaa had iyo jeer doortay digaag iyo baasto diyaarisay hooyadiis. Mid ka mid ah xusuusta ugu wayn ee qoyskiisa ayaa ka mid ah inuu ku jiro dhabarka baabuurka waalidkiis, isaga oo u socdaalaya meel aan ka tirsanayn League, oo isku mid ah cuntada (Digaaga iyo Baastada) hortiisa. In uu erayada ...
'Waxaan u safri lahaa Alfreton cayaaraha iyo aabahay, Lee, waxaan wadi lahaa, ' ayuu yiri Pickford.
Wuxuu sii waday ... 'Waxaan cuni jiray cuntadeyda ka hor ciyaarta. Hooyaday waxay ka dhigaysaa digaaga iyo baastada waxayna ku dhejisaa tuubo. Ma hubo inay aheyd mid aad uwanaagsan laakiin ilaa iyo intii aan ku soo aaday ciyaartaan waa wax sax ah!. Waxyaaluhu way ka duwan yihiin sabtiyada. Hooyaday, Sue, waxay igu qaadan laheyd inaan tababar ku qaato taksi markii aan caruur ahaa. Tani waxay dhacdaa markii aabahay dhise wax dhise, waa inuu shaqeeyaa subaxa sabtida. "
Walaal: Walaalkiis, Richard Pickford ayaa ahaa mid ka mid ah kii isaga u dhigay jidka si uu u noqdo goolhaye. Labada kooxood ayaa wada ciyaaray kubadda markii ay caruur ahaayeen. Nasiib darro, Richard weligeed uma aysan dhicin. Khibradiisa nasiib darrada ah ee ciyaaraha xirfadlaha ah ayaa u adeegsaday in uu xoojiyo walaalkiisa da 'yar ee walaalkiisa ah si uu u guto himiladiisa isagoo kor u qaadaya hogaaminta horyaalka England. Gareth Southgate ogaysiis isaga.
Jordan Pickford Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka loo yaqaan 'Biography' -Waalidiintu wicitaanku wuxuu ahaa Joke
Markii Pickford uu ugu yeeray xulka qaranka kadib markii Burnley uu Tom Weaton uu ku dhaawacmay tababarka ka hor isreebreebka Koobka Adduunka ee Slovenia. Tani waxay horseedday wacdadiisa xulka England.
Akhriska Pickford ee sheekada waa sida soo socota; "Waxaan ku soo laabtay gurigeygii iyo aabaheyga markii aan telefoonka u sheegay, 'Waxaa laguu yeeray, hoos u dhac sida ugu dhakhsaha badan'. Anigaa i jiiday. Waxaan idhi, 'Haa, waan ka baxayaa England, hadda waan hoos u socdaa, waxaan soo wacay oo kaliya taleefan'.
"Waxay tagtay, 'Maya inaadan' - waxay u maleyneysay in aan kor u kacayo, mar kale mar labaad! Waxay ahayd waqti gaaban, laakiin ka maqnaanshaha labada habeen ee ciyaartoyda ugu fiican dalka ayaa ahaa khibrad waxbarasho oo ballaadhan. "
Hubinta FACT Waad ku mahadsantihiin akhrinta our Story Story Childhood PICS At LifeBogger, waxaan ku dadaalnaa saxnimada iyo caddaaladda. Haddii aad aragto wax aan ku habboonayn qodobkan, fadlan ku qor faalladaada ama nala soo xiriir!.
Michail Antonio Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Wada-noolaanshaha
Dele Alli Childhood Story Plus Xaqiiqooyinka Weriyeyaasha